Kuwait oo ay saamaysay qiimaha shidaalka - BBC Somali
Kuwait oo ay saamaysay qiimaha shidaalka
Image caption Dadka reer Kuwait ayaa dowladda ka hela amaahyo aan dulsaar lahayn oo ay ku gataan guryo.
Iyadoo ay tahay waddanka lixaad ee leh kaydka shidaalka ugu badan adduunka, dadka reer Kuwait ayaa u bartay nolol raaxo leh. Sida amaahyo aan lahayn dulsaar oo ay guryo ku gataan, waxbarasho lacag la'aan iyo adeeg caafimaad oo lacag la'aan ah. Shidaalka iyo cuntada ayaa raqiis ah sababtoo ah dowlada ayaa lacag ku kabto.
Laakiin sida waddamada kale ee gacanka, hoos u dhaca sicirka shidaalka adduunka ayaa ku qasbay waddanka inuu ka fakaro inuu sii wadi karo ageegyada uu dadkiisa sida raqiiska uu ugu sameeyo.
Bishii hore, afhayeenka baarlamaanka Marzouq al Ghanim, ayaa ka digay in hadii la sii wado sidii hore ee wax loo qarash garaynayay inay noqon doonto "isdil dhaqaale"
Image caption Kuwait ayaa u baahan inay yarayso miisaaniyada dowladda kadib markii ay hoos u dhacday lacagtii ka soo galaysay iibinta shidaalka.
"Been uma sheegi karno dadka reer Kuwait, ma dhihi karno ma idin saamayn doonto", ayuu dhahay qof walba waa ay saamayn doontaa".
Bishii Janaayo, Amiirka Sheikh Sabah al Sabah, ayaa ka hadlay baahida loo qabo in si fiican loo maamulo qarashka dowladda iyo dhimista miisaaniyada si wax looga qabto miisaaniyada dowladda ee yaraanaysa.
Laakiin, mar ay dowladda isku dayday inay joojiso lacagta ay ku kabto shidaalka sanadkii hore, ayaa si aad ah ay u dhaleeceeyeen xildhibaanada baarlamaamka.
Image caption Ku simaha wasiirka maaliyada Anas al-Saleh ayaa rajaynaya 10% canshuurta shirkadaha inay kordhin doonto lacagta dowladda ay hesho.
Cadaadiska ayaa keenay in lacagta lagu kabo shidaalka la sii wado, inkastoo go'aan lagu gaaray in balba walba dib loo eego iyadoo lala soconayo sicirka shidaalka ee adduunka.
Ku simaha wasiirka maaliyada, Anas al Saleh, ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in dowladda ay ansixisay qorshe ay ku bilaabayso 10% canshuur laga qaadayo faa'iidada shirkadaha, iyadoo ka mid ah talaabooyin loogu tala galay in lagu dhimo lacagta ka dhiman misaaniyada dowladda.
Miisaaniyada dowladda ayaa lagu wadaa inay sanadkan noqoto $27.1 bilyan oo dollar.
Mashruucyada dowladda oo ay ku jiraan gagida dayuuradaha, dekado iyo xarumo shirkadda batroolka ee Kuwait ayaa la iibin doonaa oo noqon doona ganacsi si gaar ah loo leeyahay.